blogger (blogspot) strong points | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » blogger (blogspot) strong points
blogger (blogspot) strong points
- Myanmar Web Designer
Posted by Myanmar Web Designer on May 3, 2013 in Computers & Technology |0comments
Google ရဲ့ hosting မှာ website run ခွင့်ရတဲ့အတွက် website အမြန်နှုန်း စိတ်မပူရခြင်း။
ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟိုးအရင်ကနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ အင်တာနက် အမြန်နှုန်း မြင့်လာပါပြီ။ ဒါတောင်မှ တစ်ခြား နိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့ ယှဉ်ရင် အများကြီး နှေးနေပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းနှေးတဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ website ရဲ့ အမြန်နှုန်း မြန်ဆန်နေဖို့ အလေးထားဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော့်ကို comment မှာ website အမြန်နှုန်း မြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ မေးထားတာ ရှိဖူးပါတယ်။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ website လောကထဲကို အခုမှ စဝင်မှာဆိုရင်တော့ blogger ကိုသာ သုံးလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ website အမြန်နှုန်း မြန်ဖို့အတွက် hosting, coding နဲ့ website မှာ အသုံးပြုတဲ့ ပုံတွေရဲ့ အရွယ်အစား စတာတွေနိုင် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို blogger မှာ ကိုယ်တိုင် ဘာမှလုပ်စရာ မလိုပဲနဲ့ အဆင်သင့် ပြုလုပ်ထားပြီးသားပါ။ Hosting အတွက် google ရဲ့ hosting က မြန်ပြီးသားပါ။ coding အရလည်း standard မီပြီးတော့ website မြန်ဆန်အောင် ရေးထားတဲ့ အလွယ်တကူ ယူသုံးလို့ရတဲ့ blogger template တွေ အများကြီးပါ။ အသုံးပြုတဲ့ ပုံတွေရဲ့ အရွယ်အစားအတွက်ကျတော့လည်း user တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပုံတင်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီပုံရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ နောက်တစ်ခုက အလေးချိန်လို့ပဲ သုံးပါရစေ၊ အဲဒီ အရွယ်အစားနဲ့ အလေးချိန်ကို အလိုလျောက် လျှော့ချပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိ website အမြန်နှုန်း နှေးမှာ စိတ်မပူရပါဘူး။ ဒါတွေ ဒါတွေ အပြင် website တစ်ခုမြန်အောင် ပြုလုပ်ရမယ့် အရာအားလုံးကို ပြုလုပ်ထားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် blogspot website တွေကို အမြန်နှုန်း စစ်လိုက်ရင် အမြဲတမ်းနီးပါး Grade A သို့မဟုတ် Grade B ရပါတယ်။
SEO ကောင်းမွန်အောင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
Google webmaster tool ဆိုတာ SEO သမားတွေ မိမိ website အတွက် အသုံးပြုတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန် website တစ်ခုကို run တဲ့ သူတစ်ယောက်အဖို့ မိမိ website ကို webmaster tool နဲ့ မိမိဘာသာ ချိတ်ဆက်ရပါတယ်။ Blogger အသုံးပြုတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်တော့ တကူးတက ချိတ်ဆက်နေဖို့ မလိုပဲ၊ blog ပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့ webmaster tool နဲ့ အလိုလျောက် ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ အဲဒါအပြင် google search engine ကလည်း google ကပဲ လုပ်တာဆိုတော့ blogspot က SEO တက်တာ အရမ်းမြန်သလို အရမ်းလည်း သိသာပါတယ်။
Google Plus social network နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး မိမိ website လူဝင်များအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
Google Plus ကို လူတိုင်း မသိနိုင်ပေမယ့် Facebook ကိုတော့ လူတိုင်းနီးပါ သိကြမှာပါ။ Google Plus ဆိုတာ Google က ပြုလုပ်ထားတဲ့ Facebook လို social network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Facebook လောက်တော့ လူသုံးမများပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူ သန်းပေါင်း ၂၀၀ လောက် သုံးကြပါတယ်။ Blogspot website တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့ Google Plus က မိမိ profile နဲ့ အလိုလျောက် ချိတ်ဆက်ထားပြီးသားပါ။ Blogspot မှာ post တင်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲ G+ မှာ share လုပ်ဖို့အတွက် အဆင်သင့် ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် G+ မှာ သူငယ်ချင်းများများ ရှိရင် ကိုယ့် website ကိုလည်း လူများများ ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ G+ မှာ page လုပ်ပြီးတော့ အဲဒီ page နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသေးတယ်။ page ဒါမှမဟုတ် profile တစ်ခုကိုသာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
ပုံတင်တဲ့အခါမှာ Google Picasa ကို ရောက်သွားတဲ့အတွက် ပုံတွေ တစ်စုတစ်စည်းထဲ ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်း။
Google Picasa ဆိုတာက google ရဲ့ နောက်ထပ် product တစ်ခုပါ။ အတိအကျပြောရရင် ပုံတွေ တင်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ blogspot တို့ G+ တို့မှာ တင်လိုက်တဲ့ ပုံတွေအားလုံး picasaweb.google.com ကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ တစုတစည်းထဲ အားလုံးဖော်ပြထားပါတယ်။ အချိန်မရွေး ပြန်ကြည့်၊ ပြန် edit လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီက ဖျက်လိုက်ရင်တော့ နဂိုတင်ထားတဲ့ နေရာမှာ အဲဒီပုံက ပေါ်နေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Video တင်တဲ့အခါမှာ youtube နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့် youtube မှ ကြည့်မယ့်သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေခြင်း
Google က ပုံအတွက် picasa တို့ flickr.com တို့လို ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရှိသလိုပဲ၊ video အတွက်ဆိုလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ကို နာမည်ကြီးတဲ့ youtube.com ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ Youtube မှာ အချိန်ကုန်နေတဲ့လူတွေ သန်းနဲ့ချီပါတယ်။ Youtube ကို တိုက်ရိုက် သွားကြည့်တဲ့သူ ရှိသလို၊ Facebook တို့ twitter တို့မှာ video တွေ share လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီ website တွေကတစ်ဆင့် ကြည့်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ blogger မှာ video တင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အခုန ဓာတ်ပုံလိုပဲ youtube က ကိုယ့်အကောင့်မှာ အလိုလျောက် တင်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ video ကို ကြည့်တဲ့ လူအရေအတွက်လည်း များလာစေပါတယ်။ Youtube video တွေမှာလည်း ကြော်ငြာထည့်လို့ရတာကြောင့် တစ်ကယ်လို့ ခင်ဗျားက video မှာ google ကြော်ငြာ(google adsense) ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံလည်းရနိုင်သေးတယ်ဗျ။
Interface ဆိုတာကတော့ အသုံးပြုသူတွေနဲ့ မြင်နေရတဲ့ ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် website ကြား အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ စာတစ်တန် ပေတစ်တန်နဲ့ ပြောလို့ နားမရှင်းဖြစ်သွားရင် လွယ်လွယ် ရှင်းရှင်းပဲ ပြန်ပြောပါမယ်။ Interface ဆိုတာ အသုံးပြုရ လွယ်ကူမှုပါပဲ။ Interface ကောင်းတယ်ဆိုတော့ အသုံးပြုရတာ လွယ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ Google blogspot တွေက သုံးရတာလွယ်သလို ဘယ် menu က ဘာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘယ် ခလုတ်က ဘာကိုဆိုလိုတာ ဆိုတာကို သာမာန် user တစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲ သိပ်မရှိပါဘူး။
adsense နဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ မိမိ blog မှာ ကြောငြာထည့်သွင်းပြီး ငွေရှာနိုင်ခြင်း။
ကျွန်တော်တို့ သူများ website တွေ သွားကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်လို ကြော်ငြာတွေ ထည့်ထည့်ထားတာ တွေ့ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ Google ကလည်း google adsense လို့ နာမည်ပေးပြီးတော့ အဲဒီလို ကြော်ငြာထည့်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်ပါတယ်။ တစ်ခြား company တွေကတော့ သူတို့ hosting free သုံးတဲ့အတွက် ကိုယ်က သဘောမတူပဲ ကြော်ငြာတွေ လာထည့်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ Google ကတော့ အဲလို မလုပ်ပါဘူး။ blog ရေးတဲ့ blog ပိုင်ရှင်က သဘောတူမှ ကြော်ငြာထည့်တာပါ။ ဒါတောင် အလကား မထည့်ပါဘူး။ Google က အလကားပေးထားတဲ့ blog မှာ google က ကြော်ငြာထည့် ဖော်ပြရင် google က ပိုက်ဆံပေးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ website တွေဆိုရင်တော့ အလွယ်တကူ ကြော်ငြာထည့်သွင်းနိုင်ပြီးတော့ အခြား ဘာသာတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ blog ဆိုရင်တော့ ကြော်ငြာထည့်ရတာ နည်းနည်းအလုပ်ပိုရှုပ်သလို၊ ပိုက်ဆံရတာလည်း နည်းပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံတော့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။
Widgets ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ blog မှာ ထပ်ထည့်လို့ရတဲ့ တိုလီမုတ်စတွေပါ။ blogspot မှာပါတဲ့ အဲဒီ တိုလီမုတ်စတွေကလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ blog မှာ အသစ်တင်တိုင်း subscribe လုပ်ထားတဲ့လူတွေဆီကို မေးလ်ပို့တာတို့ Google 1+ button တို့ blog author ကို G+ က profile နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး ဖော်ပြပေးတာတို့ အဲဒီ widget တွေက အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ တစ်ခြား ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ widget တွေလည်း ထပ်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်။
Myanmar IT မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
About Myanmar Web Designer
Myanmar Web Designer has written 35 post in this Website..
An IT man who founded Myanmar Web Designer and love SEO crazily. I sometimes share IT related articles at Myanmar IT Blog.
View all posts by Myanmar Web Designer →